‘चङ्गा चेट’ रिलिज भदौ १५ मा कि २२ मा ? | ईमाउण्टेन समाचार
साउन २६, २०७५ पढ्न ४ मिनेट
काठमाडौं, २६ साउन । नेपाली नक्कली नोटसहित पक्राउ परेर २५ लाख धरौटीमा रिहा भएका निर्माता माधव वाग्ले निर्मित नयाँ फिल्म ‘चङ्गा चेट’ को रिलिज अन्योलमा परेको छ ।
केही हप्ता अगाडि निर्माण टिमले फिल्मको रिलिज डेट भदौ १५ गतेलाई लक गरेको थियो । सो मितिमा फिल्म रिलिज गर्ने भन्दै गीत सार्वजनिक गर्न कार्यक्रम पनि राखिएको थियो । तर, अन्तिम समयमा टेक्निकल प्रोब्लम भन्दै गीत सार्वजनिक गरिएन ।
अब पूर्वनिर्धारित मितिमा ‘चङ्गा चेट’ नआउने कन्फर्म भएको छ । फिल्मीखबरसँग कुराकानी गर्दै निर्देशक दीपेन्द्र के. खनालले भदौ १५ मा फिल्म रिलिज नहुने कुरामा लालमोहर लगाए । ‘अहिलेसम्म गीत त फ्याक्न सकेका छैनौं । पूर्वनिर्धारित मितिमा अब फिल्म आउँदैन’, उनले भने ।
स्रोतका अनुसार, उक्त फिल्मलाई भदौ २२ मा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । निर्देशक खनालले यो कुरा भने खुलाउन चाहेनन् । उनले फिल्मको नयाँ रिलिज डेट चाँडै घोषणा हुने बताए ।
भदौ २२ मा यसअघि नै ‘रामकहानी’ र ‘रोजी’ भिड्ने कन्फर्म भइसकेको छ । अब ‘चङ्गा चेट’ पनि यो मितिमा आउने कन्फर्म भए तीन ठूला फिल्मको भिडन्तले सिनेवृतमा अर्को तरंग सृजना गर्ने पक्का छ । दर्शक भने कुन फिल्म हेर्ने ? राम्रै दोधारमा पर्नेछन् ।
‘चङ्गा चेट’ मा प्रियंका कार्की, ऋचा शर्मा, अर्पण थापा, आयुष्मान देशराज जोशी, परमिता राज्यलक्ष्मी राना, सुरक्षा पन्त, माओत्से गुरुङ, रविन्द्र झा, सन्दीप क्षेत्री, आशिफ शाहलगायतका कलाकारको अभिनय छ । फिल्मीखबरबाट
क्रिकेट खेलाडीले लामो समयदेखि नपाएको तलब केही दिनमा पाउने
रेल विभागद्वारा विवादित ५४ वटा ठेक्का रद्ध